हावाहुरीले रौतहटमा १ जनाको मृत्यु ! - PUBLICAAWAJ
हावाहुरीले रौतहटमा १ जनाको मृत्यु !
प्रकाशित : मङ्गलबार, चैत २६, २०७५१६:०७ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
काठमाडौँ, मंगलबार बिहान आएको हावाहुरीको कारण रौतहटमा १ जनाको मृत्यु भएको छ । यो घटना बिहान करिब ९ बजेको हो । मृत्यु हुने देवाही गोनाही नगरपालिका ३ घर भएकी ६० बर्षीय रामसखी देवी चमइन रहेकी छिन् ।
परिवारजनका अनुसार हावाहुरीले घरको छाना उडाउदा टाली खसेर चोट लागेपछि उनको मृत्यु भएको हो । हावाहुरीबाट वृद्धाको मृत्यु संयोग मात्रै भएको रौतहटका एसपी भुपेन्द्र खत्रीले बताएका छन् । उनका अनुसार घरको छाना उडाएपछि पानीमा भिजेर चिसो भई मृत्यु भएको हुन सक्दछ ।
हावाहुरीसंगै आएको असिना पानीले परोहा नगरपालिकाको १, २, ३ र ४ स्थित दलित बस्तीका पचास भन्दा बढी घरको छाना उडाएको छ । साथै वृन्दावन नगरपालिकाको खैरा र रमौली वैरियामा पनि हावाहुरीले क्षति पुर्‍याएको बुझिएको छ ।
रमौलीमा घरको छाना खस्दा घाइते भएका ६३ बर्षीय तिलक सहनीको गरुडामा उपचार भइरहेको छ । हावाहुरीको अत्याधिक वेगका कारण गौर भन्सार कार्यालयको फलामको वैरियर समेत भाँचीएको छ भने जिल्लाको विभिन्न स्थानमा फल लागेका आँप र लिचीको बोटलाई निकै क्षति पुग्नुका साथै इटाभटामा तयार पारिएको करोडौंको काँचो इटा नष्ट भएको छ ।
युवाहरुमा लागुऔषको प्रयोग नियन्त्रण गर्न विशेष अपरेसन सुरु
ट्रकको ठक्करबाट घटनास्थलमै ३ को मृत्यु ।
नेपाल र भारतको सीमाबाट दुई दिनमै करिब ३८ लाख बराबर समान बरामद